Qorshihii lagu doonayey in Garoonka San Paolo loogu magac daro Maradona oo ay ka dhalatay dood DIIMEED | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Qorshihii lagu doonayey in Garoonka San Paolo loogu magac daro Maradona oo...
(Napoli) 04 Dis 2020 – Qorshihii lagu doonayey in Garoonka San Paolo loogu magacaabo Diego Armando Maradona ayay caqabadi ka hor timid kaddib markii ay koox wadaaddo Masiixi ihi ay warqad u qoreen Archbishop-ka Napoli ee Crescenzio Sepe iyagoo si rasmi ah u waydiistey inuu arrintan is hor taago.
Duqa Magaalada Napoli, Luigi De Magistris, ayaa si dhaqse ah u guddoonsadey in garoonka lagu samiyo halyeeygii reer Argentina oo todobaadkii hore rawaxay isagoo 60-jir ahaa, balse waa go’aan aanu qof kasta ku faraxsanayn.
Sida lagu qoray Il Mattino, koox wadaaddo ayaa arrintaa ka dhiidhiyey iyagoo qaba in garoonku uu sito magaca qof ku wayn dadka Masiixiga ah oo ah San Paolo.
“Anaga oo aan isla waynayn waxaan kuu soo jeedinaynaa in garoonku ugu yaraan yeesho laba magac sida San Paolo-Maradona, si la mid ah midka Milano ee San Siro-Meazza. Sidaas waxaa ku badbaadaya caqiiqadii iyadoo ciyaaryahankana la sharfayo.” ayay ku qoreen warqadda.
Waxaa warqadda ku saxiixan don Salvatore Giuliano, don Luigi Merola, don Carmine Amore, don Lello Ponticelli iyo don Armando Sannino, lamana oga waxa laga yeelayo maadaama aanay garoonka lahayn hay’ad diimeed oo ay leedahay Pozzuoli.
Waxaa sidoo kale ra’yiga wadaadada ka hor jeeda qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha SSC Napoli.
Previous articleTigreega oo ay Maqalla maanta ku haysato mashaqo ay Muqdisho ka sameeyeen 15 sanadood kahor + Sawirro
Next articleKhaladaadka nidaam ee isaga soo taraya ee Maamul-goboleedyada waxaa eeddeeda iska leh DF Somalia